5 Best European Capitals To Travel By Train | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Best European Capitals To Travel By Train
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Britain, Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby Alemana, Train Travel Holland, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 17/04/2020)
Ny fotoana farany tonga – na ianao vao diplaoma oniversite, sasin-tenin'ny avy no ho an'ny isan-taona vakansy, na dia nanapa-kevitra fa ny fitaoman'ity tany Tsidika tsy ho hita, ianao efa nifidy ny handeha Eoropa lamasinina. Tena tantaram-pitiavana hevitra, ny diany Nandeha an'arivony nandritra ny taona maro. Mety ho tanteraka ny tena henjana. Eoropa dia fantatra amin'ny lalamby tsara fifandraisana. Avy eo an-toerana mora vidy tapakila ho an'ny kaontinanta-EU naharitra rail handalo, fa mora ny mitsambikina eo amin'ny overnighter ary tonga amin'ny ny toerana halehany ny ampitso maraina, vonona ho traikefa nahafinaritra ny vaovao.
Fa aiza no tokony handeha? Na izany ny voalohany na ny fahafolo, ny boky, noho ireo porofo ny fiaran-dalamby misy mety hitarika ho amin'ny adin-tsaina, ny fisafotofotoana sy ny tahotra tanteraka tsy hita popoka avy. tsy manahy – satria efa nangonina eto siny lisitry ny 5 Eoropa tsara indrindra kapitaly mba handeha ho lamasinina. Mipetraha, jaigrafy ny, ary afa-toerana ho ny tsara indrindra Frantsa baguettes, satria isika dia handeha amin'ny mitaingina.
Rail Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
1. Best European Capitals To Travel By Train: Paris, Frantsa
Araka ny nampanantenainy, manomboka izany izahay dia tsotra, amin'ny fijanonana any amin'ny iray amin'ireo malaza indrindra eran-tany sy ny tantaram-pitiavana malaza tanàna. Paris manana ny sasany amin'ireo tsara indrindra lalamby fifandraisana manodidina, amin'ny fiaran-dalamby mihazakazaka manerana ny afovoan-tanàna, ka ianao tsy lavitra avy amin'ny gara. Paris dia feno zavatra atao, ka ianao te-hijanona eto fa telo, fara fahakeliny andro mba hahazoana topimaso amin'ny fiainana tanàna.
Atsaharo ny Louvre for-pijery amin'ny Mona Lisa, na mampihatra ireo glutes amin'ny fihanihana ny Arc De Triomphe. Ankafizo ny sakafo hariva Cruise ny Rhin, hamangy sasany BOUTIQUES frantsay, and take in the gleaming Eiffel Tower as it comes to life in the evenings.
Mazava ho azy, Paris dia mihoatra noho ny afovoan-tanàna. Ny tànana hafa kely ny renivohitra no an-trano ny roa tapitrisa, izay midika hoe afaka mandany herinandro eto tsy misy tena Scratching ho etỳ ambonin'ny zavatra manana ny tolotra. Getaway ho andro iray lavitra avy amin'ny tafiny tao amin'ny Pont Alexandre III sy ny loha tsy mahazo manao Versailles, aiza ny Royal Palace Mbola manjaka na dia eo aza ny toerana banga ambony indrindra hatramin'ny 1700 ny. Day tapakila fotsiny € 20 ary ahitana fidirana ho any amin'ny Palace, ny Gardens ary ny maro hafa. Tsara kokoa, mihazakazaka fiaran-dalamby avy any afovoan-tanàna mivantana amin'ny Palace, izay mahatonga mahazo misy tsio-drivotra. Io fomba ofisialy interconnectedness mahatonga Paris iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny fiaran-dalamby Eoropa kapitaly nandehanany.
Ny iray amin'ireo manokana toerana tena tanàna ary adiny roa monja avy any Paris lainga ny renivohitry ny Fanjakana: London. Io mpandrendrika dia vilany ny kolontsaina an-trano ny whopping sivy tapitrisa ny olona avy amin'ny lafim-piainana rehetra. Avy posh Chelsea ny panahy Soho, hahita asa atao ho an'ny olona rehetra ao amin'ny antoko. Trondro iray amin'ireo kira farany alohan'ny loha ny ny Globe Shakespeare sy ny mahavita ny alina tao amin'ny Shard, ny avo indrindra tilikambo teo London.
Tsy te-haingana ny alalan 'ity tanàna ity, drafitra toy izany ny fotoana mifanaraka amin'izany. Na ianao hizotra ho any amin'ny Harry Potter Studios (adiny iray avy any afovoan-tanàna), na fotsiny ny fandraisana ny fari lehibe toy ny Tilikambon'i Londres, St. Paoly Cathedral, Westminster Abbey, Big Ben, na ny London Eye, isa-minitra lany London dia fahafahana hianatra bebe kokoa momba ny firenena izay namelatra ny fanjakana indray mandeha izao tontolo izao.
Ny Eurostar fiaran-dalamby haingam-pandeha avy any Paris maka anao ho any London afovoan-tany fotsiny ny ora roa, izany hoe ianao mandeha handany kely kokoa ny fotoana sy ny fotoana bebe kokoa adventuring. Noho izany, heverintsika London mba ho iray hafa ny tsara indrindra Eoropeana kapitaly nandeha lamasinina.
Amsterdam To London Lamasinina
Paris ho any London Lamasinina
Berlin ny London Lamasinina
Bruxelles any London Lamasinina
3. Best European Capitals To Travel By Train: Amsterdam, Pays-Bas
Malaza noho ny lakandrano sy ny bisikileta-miankin-doha mponina, Amsterdam mamirapiratra toy ny Netherland ny renivohitra. Amin'ny endrika tsy manam-paharoa, Amsterdam dia mahafatifaty tokoa tanàna sy ny mpilalao eo Eoropeana renivohitra. Fiaran-dalamby avy any Paris haharitra adiny telo, ka hametraka anao any Amsterdam Centraal, miorina ao am-pon'ny an-tanàna.
Head ny Museumplein mba handray ao amin'ny tranom-bakoka Van Gogh alohan'ny sasin-tenin'ny an-tranon'i Bols Cocktail & Genever Experience, ka tafiditra ao anatin'izany ny safidy ny molotov amin'ny efitra Tsiro.
Aza adino ny Cruise ny lakandrano, na. Na maka vita fanoloran-tena na ny hop izahay fitsidihana teo ny iray tao an-tanàna ny sambo-bahoaka, ianao hahazo manontolo fomba fijery vaovao avy amin'ny rano. Na dia eo aza ny fironana ho an'ny sambo sy bisikileta, Amsterdam no mora idirana rehetra an'i Eoropa alalan'ny lalamby haingam-pandeha, fanaovana izany ho an'ny hafa ka hiady ambony renivohitra Eoropa tsara indrindra ho an'ny fiaran-dalamby mandeha.
4. Berlin, Alemaina
Ny fanekena ho alemà fahaizan'ny, ny tanànan'i Berlin dia mahavariana fianarana ho fanehoana firaisankina. Nizara roa ny Berlin Wall, renivohitra ity ihany no tafaverina intsony ny firaisan-tsaina ao 1989 manaraka ny firodanan'ny fitondrana kominista any amin'ny tany atsinanana. Nanomboka tamin'izay, dia nipoaka tamin'ny an-drenivohitra fivoarana sy ny ankehitriny an-trano ny roa tapitrisa mahery ny olona. Tena feno asa tanana labiera trano fisotroana, tranombakoka, ary ny graffitied sisa tavela ao amin'ny Wall.
Toy ny afovoan-tany ny kolontsaina, Berlin dia tsy maintsy-fitsidihana. Na izay tadiavinao voadio fialam-boly ny endriky ny opera, na nitady namely ny sasany amin'ireo hippest haunts any Eoropa, Berlin dia tsy mba ho hita.
Ho Na dia hahatratra anareo izany, fara fahakeliny, mba enina ora avy any Amsterdam eto, misy maro fiarandalamby isan'andro, izay midika hoe afaka hametraka ny fandaharam-potoana ny ho tonga.
5. Best European Capitals To Travel By Train: Prague, Repoblika Tcheky
Miavaka amin'ny kapitaly Eoropa Andrefana, Prague no renivohitry ny Repoblika Tseky any Eoropa Atsinanana, ary iray amin'ny malaza indrindra Eoropa Afovoany tanàna. Home ho iray amin'ireo trano famakiam-boky malaza indrindra eo amin'izao tontolo izao, ny Klementium, Prague dia manapariaka ny kolontsaina manodidina isaky ny zorony. Tsidiho ny Kintana Clock, ny tranainy indrindra famantaranandro miasa eto amin'izao tontolo izao. Makà hoe nandeha manodidina ny Old Town Square, izay rarivato eny an-dalambe ary ny sakeli-dalana eto pedestrianized hoe afaka mandany ora maro nirenireny tsy misy ahiahy.
Top eny ny fotoana miaraka amin'ny zava-pisotro iray ao an-tanàna ny maro lakaly mihidy alohan'ny loha avy amin'ny mozika festival.
Prague mirehareha tsara lamasinina rohy amin'ny tanàna hafa, anisan'izany ny fotoana dia avy any Berlin ny efatra ora sy sasany. Ajanony eto vao tafarina tamin'ny vokatr'iny tantaran'ny tanàna alohan'ny hanohizany ny dianareo manerana ny sisa Eoropa.
Eoropa dia midadasika sy isan-karazany tontolo Union izay midika hoe ny mora kokoa noho ny hatramin'izay ny mandeha lamasinina. Araraoty ny firenena borderless ny handeha ho any ireo kapitaly manan-tantara eo amin'ny fotoana. Skip ny aretin'andoha ny seranam-piaramanidina sy ny vahoaka ary ny overpriced fiaramanidina sakafo sy mampiasa ny fiaran-dalamby mba handeha. Na mitsambikina tao an-tsambo-paritra lalana na mandany kely fanampiny ho an'ny lalamby haingam-pandeha, ianao dia mankafy ny lalamby, ny hizaha sy ny rehetra betsaka kokoa.
Efa nahazo anao rakotra ny Travel torohevitra. Ary tonga ny fotoana au livre ny sasany saran-dalana! Save A Train no toerana mba hividy tapakila fiaran-dalamby.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Best European Capitals To Travel By Train” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/european-capitals-travel-train/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/it_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / izany / de na / en sy ny maro hafa fiteny.
renivohitra capitals europeantravel europetrains eurotrip London Train Travel travelfrance travelgermany travelnetherlands
Carissa dia nazoto dia lavitra sy ny mpanoratra izay manao ny velona amin'ny alalan'ny fitondrana ny tsara indrindra amin'ny dia toro-hevitra ho azy mpamaky. Izy no nandondòna ny 40 bucketlist firenena eny izy hatramin'izao, ary tsy misy mieritreritra ny nijanona. Na sipping kafe in Napoli na hankalaza Harry Potter in Edinburgh, izy no faly foana ny hihaona olona vaovao, ary jereo ny zava-baovao. - Afaka tsindrio eto raha antsoy aho
UK Train Ride Prices Mifanohitra Europe Train Prices
Nandeha lamasinina, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Train Travel UK, Travel Europe
Inona no tsara indrindra Fromazy Eoropa atolotry
Fiaran-dalamby Frantsa, Fiaran-dalamby any Italia, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe